बैंकिङ तरलता अभाव चुलिदो तर्फ, कसरी सम्भव छ समाधान ? « Sansar News
बैंकिङ तरलता अभाव चुलिदो तर्फ, कसरी सम्भव छ समाधान ?
२३ मंसिर २०७८, बिहीबार २०:०९
नारायण अर्याल, काठमाडौं । बैंकिङ तरलता अभाव नियमित रुपमा चुलिदो दिशातर्फ बढेको छ । तर हालसम्मको अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त गरिए पनि समाधान हुन सकेको छैन् ।
बैंकिङ तरलताको प्रत्यक्ष प्रभाव निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा देखिएको छ । मंसिर २३ गते सम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा मंसिर १७ गतेको तुलनामा बैंकको निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ, भने कर्जा प्रवाह ८ अर्ब रुपयाँले बढ्न पुगेको छ । बैंकहरूमा तरलता अभाव कम भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ मंसिरमा २० अर्ब रुपियाँ बजारमा पठाउने तयारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेको ट्रेजरी बिल्स खरिद गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपियाँ तरलता बैंकहरूमार्फत बजारमा पठाउन लागेको जनाएको छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार बैंकबाट लगानी भएको ऋणको ५० प्रतिशत खर्च विदेशबाट वस्तुको आयातमा हुने गरेको छ, भने अपेक्षित रुपमा राज्यको पुँजीगत खर्च हुन सकेन । जसका कारणले बैंकमा तरलतामा समस्या देखिएको हो ।
राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ तरलताको चाप निकै पर्दै गएको बताएका छन् ।
अधिकारीका अनुसार बैंकिङ प्राणालीमा झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलताको समस्या सिर्जना भएको छ । मंसिर २३ गते अर्थसमितिमा कुरा गर्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘साउनदेखि हालसम्म कर्जा ४११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ, तर निक्षेप ६४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको देखिन्छ, यो तथ्यांकले पनि केही सन्देश दिन्छ, राष्ट्र बैंकले पनि यो अवधिमा विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएका छौं ।’
गभर्नर अधिकारीका अनुसार बैंकबाट लगानी भएको ऋणको ५० प्रतिशत खर्च विदेशबाट वस्तुको आयातमा हुने गरेको छ, भने अपेक्षित रुपमा राज्यको पुँजीगत खर्च हुन सकेन । जसका कारणले बैंकमा तरलतामा समस्या देखिएको हो । अहिले कर्जा र निक्षेपबीच ३ खर्बको अन्तर रहेको अवस्था छ । तर बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलताको समस्या अहिले तत्काल सिर्जना भएको भन्दापनि यसअघि अगाडि बढाइएका नीतिका कारण भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको धारणा छ । अर्थसमितिको वैठकमा मंसिर २३ गते जवाफ दिंदै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या आफुले अगाडि बढाएका नीति र कामकारवाहीको कारण नभएको मन्त्री शर्माले तर्क पेश गरे ।
तरलता अभावको समाधान कसरी सम्भव छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार विदेशबाट हुने आयातलाई कम गरेर र विकास खर्च बढाएर बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभावलाई कम गर्न सकिन्छ । मंसिर २३ गते भएको अर्थसमितिको वैठकमा सांसदहरुसँग धारणा राख्दै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आयातमा ‘अन्वान्टेड वस्तुलाई निरुत्साहन गर्नु पर्ने बेला आएको छ, मार्जिन राखेर हुन्छ कि वा कसरी हुन्छ, ती वस्तुहरुमा कडाई गर्नु पर्नेछ, प्रतिबन्ध नै गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन ।’ गभर्नर अधिकारीले आयात वस्तुहरुहरुमा कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको समेत उल्लेख गरे । अर्को महिनबाट केहीमात्रामा ब्याजदर बढ्नसक्ने अधिकारीको भनाई रहेको छ ।
अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफु तयार भएको र लागिपरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई छ । मन्त्री शर्माका अनुसार राजश्व प्राणाली र खर्च प्राणालीमा सुधार गरि संस्थागत संरचनामा सुधार गर्ने बताए । मन्त्री शर्माले गभर्नरको धारणामा सहमती जनाउँदै आयातलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कदम अगाडि बढाउने बताए । उत्पादनमुलक २० वटा क्षेत्र छनौट गरी लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ । प्रतिस्थापन विधेयकको समयमा नै कार्यान्वयन नहुँदा पुँजीगत खर्चमा ढिलाई भएको र अब सबै विषयहरुको व्यवस्थापन भैसकेकाले खर्च प्रकृयाले गति लिन लागेको मन्त्री शर्माले बताएका छन् ।